Rombo rakanaka uye Rakanaka Riddance kune Kushambadzira mu2013 | Martech Zone
Gore rino rakakusveta here? Zvakandiitira. Rakanga riri gore rakaoma sezvo ini ndakarasikirwa nababa vangu, hutano hwangu hwakatambura, uye bhizinesi raive nemikana yakashata - kusanganisira kupatsanura neshamwari huru uye wandaishanda naye. Imi vanhu verengai bhurogu yangu yeruzivo rwekushambadzira saka ini handidi kutarisa kune dzimwe nyaya (kunyangwe dzaive nemhedzisiro), ini ndoda kutaura ndakananga kuKushambadzira neKushambadzira Tekinoroji.
Kushambadzira muna 2013 kwakayamwa
Isu takapedza gore rese tichidzosera vanhu munzira neyakavonekwa, yakabudirira, nzira dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvinopenya gore rino zvaive kwese kwese. Vatengi vedu vakachinjisa mari uye vakaisa mari mumatekinoroji mazhinji gore rino ayo akavimbisa zvakawanda uye akaendesa mari. Yakatamisa tarisiro kure nezvinhu izvo isu taiziva kuti zvinoshanda zvenguva refu uye nekumhanyisa. Yakakanda mari yakanaka uye zviwanikwa kuzvirongwa zvisina kuburitsa chero chinhu. Chakatibira vatengi uye pavakadzoka, vakashaiwa mari yekuenderera mberi nezviri kushanda.
Zvinokanganisa, kunyepa uye kumanikidza
Chimwe chinhu chakashanduka neni gore rino apo ini ndaitaura kune vatengi. Ndakatanga kutaridzika kunge curmudgeon mumba kwete pane zano mukomana. Kunyangwe pataive tichisundira mimwe mikana mitsva, ndainzwa sekunge ndaifanirwa kurwisa uye kuchengeta akawanda akawanda aripo. Takarwa sezvo vatengi vedu vasina hanya nemafambiro efoni, mavhidhiyo mafambiro, uye nekuenderera mberi nekubudirira kwemukati.
Kumanikidzwa kwemukati kumakambani aya kwaityisa… hutungamiriri hwaida mhedzisiro, kutema bhajeti, uye kudzikisa huwandu hwevashandi. Makambani akamanikidzwa kuita sarudzo yakaipa mushure mesarudzo dzakaipa uye makambani emagora akavabata aifara kusaina, kutora mari yavo, nekuvasiya vasina chinhu. Zvakatorera shamwari dzangu zhinji indasitiri kusiya kana kudzingwa basa. Ini ndinofunga hafu yehukama hwangu hweLinkedIn ine zita idzva pakambani nyowani.
Iri gore ndiro gore rekutarisa. Bhizinesi redu radzokera pakukosha kwaro kwekuona vatengi vedu vane yakanakisa inbound yekushambadzira hwaro inoteverwa neyakagutsikana zvemukati, zvemagariro uye yekutsvaga nzira iyo inovaka masimba uye kuziva kwavo mhando. Ticharamba tichibatsira vatengi vedu kubatanidza nekugadzira tekinoroji, asi vachengetedze kubva mukukanganiswa. Tichave kuvhura nezve izvo zvinoshanda uye chii zvisingaite gore rino.
Handidi kufungidzira saka handisi kuzozviita. Heino tarisiro yedu muna 2014 uye tarisiro yatiri kusundira nevatengi vedu:
Kuve nechokwadi chekuti ivo vari kushambadzira pamhepo vane hwaro hwakasimba hwakagadziridzwa kutsvaga uye zvemagariro - kuvaka chiremera chemhando uye vanhu vari kumashure kwavo.
Inbound kushambadzira kuitisa izvo chiyero uye tungamira vashanyi kuburikidza neyekutengesa uye yekushandura chiteshi.
Kuchengetedza uye kuvaka kukosha netarisiro, zvinotungamira, uye vashanyi kuburikidza neakakura email kushambadzira uye kushambadzira otomatiki maitiro.
Kubata pamusoro nhare kukura uye kugamuchirwa - kusanganisira mameseji, nharembozha, email nhare uye nharembozha.
Kugovana mabhajeti emifananidzo, vhidhiyo yehunyanzvi, webinars, uye zvimwe kuita masvikiro iyo inobatsira kutsanangura yakaoma mabhenefiti nekukurumidza uye nekuvandudza kutendeuka masekonzi nemitero.
Kutsvaka mikana yekusimudzira izvo zvinotyaira kuziva uye kuwana zvigadzirwa zvedu, masevhisi, vanhu uye marangi pamberi pevateereri vatsva vanoenderana.
Ini ndakagadzirira gore ra2013 kuti ndiende shure kwangu uye nditore gore ra2014! Uri?
Tags: 20132014simbaegoredzvaPredictionsushambadzikuchengetwaseoSocial Media Marketing
Iyo 2014 Diki Bhizinesi Kushambadzira Wishlist
Iva Social Media Kushambadzira Nyanzvi